မက်ဆီနဲ့ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့ကို တစ်သင်းတည်းမှာ အတူ မြင်တွေ့ရတော့မှာလား …. – Sports A2Z
Serie A • Transfer News
မက်ဆီနဲ့ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့ကို တစ်သင်းတည်းမှာ အတူ မြင်တွေ့ရတော့မှာလား ….
ဘာစီလိုနာအသင်းကနေထွက်ဖို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီကို ခေါ်ဖို့ ပြင်ဆင်လာတဲ့အသင်းတွေထဲ စီးရီးအေချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းပါ ပါဝင်လာတဲ့အတွက် ၂၁ ရာစုရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမား ၂ ဦးကို တစ်သင်းတည်းမှာ အတူမြင်ခွင့်ရဖို့ အလားအလာရှိနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကြယ်ပွင့် ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်နိုင်ခဲ့သလိုမျိုး အခု မက်ဆီကိုလည်း မက်လောက်ဖွယ် ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့် တစ်ရပ်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
ပြင်သစ်သတင်းစာ L’Equipeရဲ့ ဖော်ပြချက်မှာတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာ မက်ဆီရဲ့ ဖခင်လည်းဖြစ်၊ အေးဂျင့်လည်းဖြစ်တဲ့ ဂျော့ကို သတိထားချဉ်းကပ်နေပြီး အာဂျင်တီးနားဂန္ထဝင်ကစားသမားကို ခေါ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမယ့် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ခြေစွမ်းတွေကို အကောင်းဆုံး ဆက်ထိန်းနိုင်ဆဲဖြစ်တဲ့ မက်ဆီဟာ သူ့ကစားသမားဘဝတလျှောက် ဘာစီလိုနာတစ်သင်းတည်းမှာပဲ ကစားခဲ့ပေမယ့် မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်း အသင်းဥက္ကဌ ဘာတိုမြူ ဦးဆောင်တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် အခု နည်းပြသစ် ရော်နယ်ကိုးလ်မန်းနဲ့ပါ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာကြောင့် အသင်းပြောင်းချင်နေပါတယ်။
မက်ဆီကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းများစွာက ခေါ်ချင်နေသလို ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်း အသင်းမပြောင်းဖို့ ပြန်လည်ဖြောင့်ဖျနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကိုသာ မက်ဆီ ပြောင်းလာခဲ့ရင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို စုစုပေါင်း ၁၁ ကြိမ်အထိ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမိုင်းတလျှောက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး တိုက်စစ်အတွဲကို မြင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုကိုယ်တိုင်ကလည်း မက်ဆီကို စီးရီးအေမှာ လာကစားဖို့ မနှစ်ကတည်းက တိုက်တွန်းခဲ့ဖူးသလို လက်ရှိ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ ထွက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်း လက်ခံကြိုဆိုနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
UNICODE: ဘာစီလိုနာအသငျးကနထှေကျဖို့ တောငျးဆိုထားတဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဆီကို ချေါဖို့ ပွငျဆငျလာတဲ့အသငျးတှထေဲ စီးရီးအခေနျြပီယံ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးပါ ပါဝငျလာတဲ့အတှကျ ၂၁ ရာစုရဲ့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမား ၂ ဦးကို တဈသငျးတညျးမှာ အတူမွငျခှငျ့ရဖို့ အလားအလာရှိနပေါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈက ရီးရဲလျမကျဒရဈကွယျပှငျ့ ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုကို ချေါနိုငျခဲ့သလိုမြိုး အခု မကျဆီကိုလညျး မကျလောကျဖှယျငှကွေေးအကြိုးခံစားခှငျ့တဈရပျနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက ကမျးလှမျးဖို့ ပွငျဆငျထားပါတယျ။
ပွငျသဈသတငျးစာ L’Equipeရဲ့ ဖျောပွခကျြမှာတော့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးတာဝနျရှိသူတှဟော မကျဆီရဲ့ ဖခငျလညျးဖွဈ၊ အေးဂငျြ့လညျးဖွဈတဲ့ ဂြော့ကို သတိထားခဉျြးကပျနပွေီး အာဂငျြတီးနားဂန်ထဝငျကစားသမားကို ချေါဖို့ စီစဉျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အသကျ ၃၃ နှဈအရှယျရှိလာပွီဖွဈပမေယျ့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားတဈဦးရဲ့ ပုံရိပျနဲ့ခွစှေမျးတှကေို အကောငျးဆုံး ဆကျထိနျးနိုငျဆဲဖွဈတဲ့ မကျဆီဟာ သူ့ကစားသမားဘဝတလြှောကျ ဘာစီလိုနာတဈသငျးတညျးမှာပဲ ကစားခဲ့ပမေယျ့ မကွာသေးခငျနှဈတှအေတှငျး အသငျးဥက်ကဌ ဘာတိုမွူ ဦးဆောငျတဲ့ ဘုတျအဖှဲ့နဲ့ အဆငျမပွဖွေဈခဲ့တဲ့အပွငျ အခု နညျးပွသဈ ရျောနယျကိုးလျမနျးနဲ့ပါ ဆကျဆံရေးအဆငျမပွတောကွောငျ့ အသငျးပွောငျးခငျြနပေါတယျ။
မကျဆီကို ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးကလပျအသငျးမြားစှာက ချေါခငျြနသေလို ဘာစီလိုနာအသငျးကလညျး အသငျးမပွောငျးဖို့ ပွနျလညျဖွောငျ့ဖနြတေယျလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။ တကယျလို့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကိုသာ မကျဆီ ပွောငျးလာခဲ့ရငျ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကို စုစုပေါငျး ၁၁ ကွိမျအထိ ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမိုငျးတလြှောကျ စိတျလှုပျရှားစရာအကောငျးဆုံး တိုကျစဈအတှဲကို မွငျရနိုငျဖှယျရှိနပေါတယျ။ ရျောနယျဒိုကိုယျတိုငျကလညျး မကျဆီကို စီးရီးအမှော လာကစားဖို့ မနှဈကတညျးက တိုကျတှနျးခဲ့ဖူးသလို လကျရှိ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ ထှကျနတေဲ့သတငျးတှကေိုလညျး လကျခံကွိုဆိုနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၉.၈.၂၀၂၀
နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ – ၂၉.၈.၂၀၂၀